Fikarohana momba ny firaisana Raharaha vaovao momba ny fahazazan'ny zaza efa voamarina momba ny fahazazana: ny tantaram-piainan'ny mpihira Opera Metropolitan Alice Joséphine (Lily) Pons | Dorothy Angelica - Fikarohana Reincarnation
Nodinihin'i: Kira Angelica. Renin'i Dorothy Angelica
Article by: Walter Semkiw, MD, miaraka amin'ny fampahalalana nomen'i Kira Angelica
Talentan'ny fiainana taloha: Dorothy, amin'ny mbola kely, dia mpilalao sy mpihira voajanahary
Dorothy Angelica dia teraka tamin'ny 24 Sept 2010 tany Etazonia. Ny reniny, Kira, dia nanoratra tamiko tamin'ny taona 2019 momba ny fahatsiarovana ny fiainana taloha an'ny zanany vavy.
Notantarain'i Kira fa mpahazo fialamboly i Dorothy talohan'ny nianarany hiresaka. Hitsambikina eo ambany famorian-tsakafo i Dorothy mba hampihomehy ny olona rehetra. Raha 3 sy tapany taona i Dorothy dia tao anaty famokarana mozika niaraka tamin'ny ankizy 30 hafa samy hafa taona. Nangalatra tamin'ny fampisehoana i Dorothy. Ireo ray aman-dreny hafa dia nanaiky an'i Kira fa namarana ny horonantsary horonantsary izy fa tsy zanany, noho ny fisian'ny fahatongavan'ny saribak'i Dorothy.
Mitantara i Kira fa tia manao tsipìka mamirapiratra i Dorothy, indraindray folo isaky ny iray na mihoatra. Tena mafy be izy, be resaka, be bontolo ary tia mandala olona - malaza be amin'ny rehetra.
Ny mpampianatra mozika Dorothy dia nizara tamin'i Kira fa ny zanany vavy dia manana lafatra tonga lafatra, izany hoe ny olona iray dia afaka mamorona feon'ny mozika nefa tsy misy feon-peo.
Manana fanandramana sy fahitana ara-tsaina i Kira talohan'ny nahaterahan'i Dorothy
Rehefa 8 volana bevohoka i Kira, dia nifoha tamin'ny alina be tao amin'ny efitrano fisakafoany izy nanjaitra lamba firakotra ho an'ny zanany ho avy. Tampoka dia nandre feo tanora niantso tao amin'ny lakozian'izy ireo i Kira ary niantso hoe: "Neny a! Neny! ”Nandeha tany an-dakozia i Kira, saingy tsy nisy tao. Niverina tany amin'ny trano fisakafoanana sy ny zaitrao i Kira.
Nandre ny zaza iray indray i Kira avy eo nilaza hoe: "Neny", avy eo amin'ny efitrano fandraisam-bahiny. Nankany amin'ny efitrano fandraisam-bahiny i Kira ary tsy nisy olona tao.
Niverina tany amin'ny trano fisakafoana indray i Kira hanohy manjaitra. Olona araka ny fanahy izy ary naminavina fa ny fanahin'ny zanany amin'ny ho avy no nifandray taminy. Rehefa avy niasa tao anaty lamba firakotra nandritra ny minitra vitsy dia nitodika teo am-baravarana nankany amin'ny lakozia i Kira ary nahita zazavavy iray, izay toa sahabo ho 10 taona.
Ity tovovavy ity dia manao akanjo vita amin'ny homemade, plaid. Ity tovovavy ity dia nitsiky tamin'i Kira ary i Sika dia nitsiky. Ny fahitan'ilay zazavavy dia nitsaoka avy eo. Nahatsiaro ho faly i Kira aorian'ity traikefa ity. Nieritreritra izy hoe ity tovovavy ity no zaza hiteraka azy. Ny akanjo vita amin'ny plaid izay nitafy azy dia angamba zavatra nateraky ny zanany vavy amin'ny ho lasa taloha.
Taorian'ny nahaterahan'i Dorothy dia matotra dia nahatsapa i Kira fa ilay tovovavy tao amin'ny fahitany dia raha ny tena izy dia Dorothy.
Famelabelarana ny nofy ao amin'ny fanambadiana vatana
Ny fikarohana reincarnation dia manome porofo fa ny fanahy efa saika hiditra amin'ny fianakaviana iray, dia afaka mandefa nofy amin'ireo mpikambana ao amin'io fianakaviana io, matetika ilay renin'ny fanahy tonga nofo, hanambara fa ho avy izy ireo. Ian Stevenson, MD an'ny Oniversiten'i Virginia nantsoina hoe "nofinofy manambara" ireo. Toa nanana “fahitana manambara” i Kira. Raha hijery ireo karazana tranga ireo dia mankanesa any:
Fifandraisana amin'ny Fanahy ary fanambarana ny nofy amin'ny tranga Reincarnation
Mahatsiaro ny Anaran'ny Fiainany taloha i Dorothy
Raha 6 taona i Dorothy, nanapa-kevitra i Kira fa hizara aminy ny fahitana fa ananan'ilay tovovavy ao anaty akanjo plaid. Tadidio fa nitranga io fahitana io talohan'ny nahaterahan'i Dorothy.
Nampianarin'i Kira i Dorothy hisaintsaina ary rehefa reny ny nofinofin-dreniny momba ilay zazavavy dia ilay akanjo lava, dia nanapa-kevitra i Dorothy hisaintsaina raha afaka mahita hoe iza io tovovavy io taloha. Dorothy, izay vao 6 vao taona kely dia nanomboka tamin'ny akanin-jaza ary mbola tsy nianatra namaky, ary tsy nahay nampiasa solosaina. Noho izany dia tsy afaka nanao fikarohana momba ny fiainana taloha izy na dia ara-dalàna toy ny amin'ny Internet.
Rehefa afaka minitra vitsivitsy dia nanomboka niresaka an-tsipiriany momba ny fiainana mety ho izy i Dorothy. Noraisin'i Kira kahie ary nosoratany an-tsoratra izay nolazain'i Dorothy. Kira dia nanoratra ny fanambaran'i Dorothy rehefa nandeha ny fotoana. Nihevitra izy fa ny zanany vavy dia milazalaza zavatra an-tsaina, fa i Kira kosa nanoratra izany rehetra izany.
Raha nipetraka teo amin'ny gorodona nieritreritra i Dorothy dia nanokatra ny masony izy ary niteny hoe:
“Neny, fantatro hoe iza aho taloha tamin'ny fiainana lasa. Ny anarany dia toa an'i Lizy na i Lily, fa ny tena anarany dia Alice Pons. ”
Na dia tsy misalasala aza i Kira Googled ireo anarana ireo ary nahita izany Lily Pons dia mpihira opera teraka tao 1898, any Frantsa, izay nankafizin'ny laza tamin'ny 1940. Rehefa novakin'i Kira fa i Alice dia teraka ny anaran'izy ireo, dia nilentika i Kira ary saika ketraka. Tsy nanambara izay hitany tao amin'ny Internet ho an'i Dorothy anefa i Kira, satria te hahita izay mety holazain'ny zanany vavy tamim-pahatsorana izy.
Nanontany an'i Dorothy momba izay zavatra tadidiny momba ny fiainany taloha i Kira.
Mahatsiaro ny anaran'ny vadiny taloha i Dorothy
Nilaza i Dorothy fa ny anaran'ny vadiny dia "Cos Liams." Nilaza izy fa nanana biby izy ireo ary nilaza ny antsipiriany hafa tamin'ity fiainana taloha ity. Rehefa nandeha ny fotoana dia nanampy i Dorothy fa niteny tamin'ny fiteny maro i Lily Pons, nilalao piano, tiana ny mihira ary mpihira matihanina tamin'ny taonany 22. Nilaza i Dorothy fa nanana efitrano mozika tao an-tranony i Lily, tiana ny saka ary ny fihirana ny vorona.
Ny kansera iray taloha dia mamokatra fanaintainan'ny vavony
Nanamarika i Kira fa tamin'io fotoana io teo amin'ny fiainan'ny zanany vavy dia nanarary fanaintainana matetika amin'ny vavony i Dorothy. I Dorothy tenany dia nilaza tamin'ny reniny:
“Hatramin'ny nanombohanao niresaka ny amin'ny fahafatesana sy ny fahaterahana indray dia nanomboka narary vavony aho, ary malahelo aho. Mety hanary aho, Neny. Mahatsiaro ho narary vavony aho tamin'ny fiainako taloha. Tena ratsy. Mampalahelo ahy izany. ”
Indray alina, raha nanana ny iray tamin'ireny akanjo ireny izy, dia nanambara i Dorothy hoe: “Fantatro izao izay naterak'i Lily Pons, Neny. Matin'ny aretin-kibo naratra izy! ” Izany no narary kibon'i Dorothy farany.
Nikaroka i Kira ary nahita fa maty noho ny homamiadan'ny sarakaty i Lily Pons, izay miteraka fanaintainan'ny kibo. Rehefa namaky an'io dia nitsangana ny volon'i Kira!
Fantatr'i Dorothy ny sariny niainany taloha
Nizara tamin'i Dorothy ihany i Kira nony farany ny zavatra nianarany momba an'i Lilly Pons tao amin'ny Internet ary nasehony azy ny sarin'i Pons, izay nahatonga an'i Dorothy hiteny hoe: “Hey! Izaho izany! Nahita ahy volo fohy ianao izao ry neny a! ”
Ny fiainan'i Alice "Lily" Pons
Alice Joséphine Pons dia teraka tany Frantsa tamin'ny 12 aprily 1898. Nianatra piano voalohany tao amin'ny Paris Conservatory izy, nahazo ny Loka Voalohany tamin'ny faha-15 taonany. Nanjary mpihira sy mpilalao sarimihetsika miasa amin'ny anarana matihanina Lily izy. Pons. Nifindra tany New York City izy ary nanao fampisehoana niaraka tamin'ny Opera Metropolitan tamin'ny 1931 ka hatramin'ny 1960, niseho tamin'ny fahitalavitra toa ny tao amin'ny Ed Sullivan Show ary nandefa rakipeo mozika am-polony izy. Tanàna iray tao Maryland, Lilypons, no nomena ny anarany.
Manambady indroa i Lily. Ny vadiny faharoa dia conductor Andre Kostelanetz, izay mifandraika amin'ny fahatsiarovana an'i Dorothy fa nanambady lehilahy izay antsoina hoe "Cos Liams."
Alice "Lily" Pons dia maty tamin'ny Feb 13, 1976 tamin'ny taona 77, tokony ho 35 taona talohan'ny nahaterahan'i Dorothy.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Mitovitovy ny endrik-tsehatra ao amin'i Alice Pons sy Dorothy Angelica.
Talenta fiainana taloha sy fitondran-tena ary fahaiza-manao: Talentan'ny mpihira sy mihetsika an'i Alice Pons nalaina tao amin'ny persona an'i Dorothy Angelica.
Fiovam-pirenena: Teraka tany Angletera i Alice Pons, raha i Etazonia dia teraka tany Etazonia. Ny fahatakarana fa ny zom-pirenena sy ny firazanana dia afaka miova hatramin'ny androm-piainany mankany amin'ny fiainana iray hafa afaka manampy tontolo milamina kokoa satria ny ankamaroan'ny fifandirana sy ny ady dia mifototra amin'ny fahasamihafana amin'ireo marika ara-kolontsaina ireo.
Fanahy Masina ao amin'ny Firaisana ara-nofo any am-parany: Nanana fahitana ny amin'ny zanany vavy ho teraka i Kira Angelica. Rehefa matotra i Dorothy dia nitadidy i Kira fa ilay tovovavy tamin'ny fahitany tamin'ny akanjo mangarahara dia mitovy amin'ny Dorothy.
Ian Stevenson, MD avy ao amin'ny University of Virginia dia niantso nofy izay nilaza fa nisy ny fahatongavan'izy ireo ho "nanambara nofy."